“Dacwad ka dhan ah khatarta iyo hagardaamada mashruuca Fursad Fund.. ” Guddiga fulinta ee Dallada SSE February 12, 2018 : Salaan Media
“Dacwad ka dhan ah khatarta iyo hagardaamada mashruuca Fursad Fund.. ” Guddiga fulinta ee Dallada SSE February 12, 2018
“Dacwad ka dhan ah khatarta iyo hagardaamada mashruuca Fursad Fund.. ” Guddiga fulinta ee Dallada SSE
Waxa hubaal ah in Jamhuuriyadda Somaliland lagu hayo dagaal siyaasadeed oo halis ku ah qaranimada isla markaana leh wejiyo badan. Beryahan dambe waxa Somaliland loogu soo gabanayay dhinacyada ururada aan dowliga aheyn ee ujeedadoodu tahay inay fuliyaan hawlo samo-fal ah. Bayaankan waxaynu si gaara diirada u saaraynaa mashruuca ama barnaamijka Fursad Fund.
Mashruucan Fursad Fund waa mid himilooyinkiisa laga hagayo Soomaaliya, kaas oo hadafkiisa iyo ujeedadiisu ay tahay u adeega arrimaha Somaliweyn laguna wiiqaayo jiritaanka iyo qaranimadda Somaliland. Sida ku cad qaab-dhismeedka barnaamijkan mashruucan waxa wada koox uu hoggaaminayo Wasiirkii Qorshaynta xukuumaddii Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Caynte (oo uu isagu aasaskiisa lahaa) oo hadda ah Safiirka Somaliya ee dalka UK. Ururkani waa mid had iyo jeer ku foogan furfurka iyo kala qaybinta bulshada somaliland, gaar ahaana dhallinyarada si loo daciifiyo fikirkooda wadaninimo ee ku aadan aaminsanaanta jiritaanka Somaliland.
Haddaba Fursad Fund iyo joogitaankeeda Hargeysa waa mid dhaawac ku ah qaranka Somaliland waxayna xadgudub ku tahay dastuurka dalka gaar ahaana Xeerka Ururrada Samafalka ee aan dawliga ahayn (Xeer Lr. 43/2010), xeerkaas oo golaha wakiilada J.S.L. ansixiyey 2/10/2010 isla markaana Madaxweynihii hore ee Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu ku dhaqan geliyey digreeto Madaxweyne oo soo baxday 10/11/2010.
Qodobka‐ 10aad: Waajibaadka Ururadda aan Dawliga ahayn
1. In uu ixtiraamo, aqoonsado madaxbannaanida, aayo-katashiga Qaranimada JSL, dhaqanka iyo caqiidad
a ummada JSL.
2. In uu ixtiraamo, kuna dhaqmo Dastuurka iyo xeerarka kale ee Jamhuuriyadda Somaliland, una hoggaansamo siyaasadaha xukuumadeed iyo tallooyinka xukuumadda ee ku wajahan wax qabadkooda.
Ururada aan Dawliga ahayn, waxaa ka reeban:
Haddaba iyada oo aan la soo koobi Karin dhacdooyinka ku aaddan arrimaha Somaliweynimada ee mashruuca Fursad Fund qaybteeda Hargeisa Job Fair, waxaa nasiib darro ah in Wasaaradda Qorsheynta Qaranku ay ogolaansho diiwaangelin siiso ururradaas ka soo horjeeda qaranimada Somaliland, iyadoo baal maraysa xilkii iyo waajibaadkii ka saarnaa ee loo igmaday xeerka kor ku xusan (Xeer Lr. 43/2010).
XIL GUDASHA LA’AANTA IYO WAAJIBAADKA AY KA GAABISAY
Xeerka iyo nidaamka uu ka gaabiyay wasiirkii hore gudashadooda waxa ka mid ah arrimaha soo socda:
· Xaqiijinta hadafkiisa, ujeedadiisa iyo hawlaha uu rabo in uu ka shaqeeyo ay waafaqsanyihiin xeerarka dalka.
· Hubinta in dhammaan shuruudaha ku sheegan qoddobka 13aad ee xeerkan in uu buuxiyay,
· In oggolaansho la siiyo ururada aan dawliga ahayn ka dib marka lagu qanco in uu u qalmo in la diiwaangeliyo.
· In Wasaaradda Qorsheyntu ay la socoto, dabagasho wax qabadka ay fulinayaan ururada aan dawliga ahayn.
WAX KA QABASHO LA’AANTA DACWADDII
· Hoggaanka iyo shakhsiyaadka hagaya mashruuca oo ah dad xilal ka haya xukuumadda Soomaaliya.
· Fursad Fund qaybtiisa Hargeisa Job Fair in uu yahay mashruuc xaruntiisu tahay Muqdisho.
· Cinwaanka guud ee ururka oo ah Muqdisho (Maka-Al-Mukarrama road, KM4, Muqdisho, Soomaaliya.
· Waxa kale oo ah cadeymahaa la socdey ujeedooyinka iyo himilooyinka dhabta ah ee Mashruucani salka ka hayo.
Ugu dambayn, Dallada SSE waxay xukuumadda cusub ee Somaliland si xushmadi ku jirto uga codsanaysaa inay tixgeliso warbixinaha iyo digniinaha aanu soo gudbinay oo hay’adaha sida gaarka ah ay khuseysaa ay ka qaadaan tallaabada ku habboon ee sharciga waafaqsan mashruucan Fursad Fund qabta Hargeysa (job fair) oo hagardaamo ku ah qaranka Somaliland.
« Daawo:Wasiirka Maaliyada Somalia Oo Ka Jawaabay Cabasho Ka Timi Ganacsatada Magaalada Muqdisho Feb 12.18
Daawo Nuxurka Kulan Xaasasiya Oo Dhexmaray Wasiirka Arimaha Dibada Iyo Gudida Joogtada Golaha Wakiilada..Feb 12.18 »